FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA BASSETOODLE - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Bassetoodle
Alika mifangaro Basset Hound / Poodle mifangaro
Teddy ilay kilalao Poodle / Basset Hound mix (Bassetoodle) eo amin'ny 7 taona eo ho eo
Ny alika Bassetoodle dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Basset Hound ary ny Poodle . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Ny renin'i 'Ollie dia Basset Hound misy tricol sy ny rainy, kilalao apricot Poodle. Manakaiky ny 2 taona izy dia milanja kely eo ambanin'ny 12 kilao ary 35 santimetatra eo amin'ny soroka. Toetoetra: tena milalao, alika ary olona sariaka, haavon'ny angovo avo kokoa noho ny Basset, saingy tsy dia be loatra toy ny ankamaroan'ny Toy Poodles. Ny palitaony tariby dia milatsaka amin'ny vanim-potoana ary mila esorina indroa isan-taona. '
'Salama, avy any Brezila aho ary mandefa sary an'ny alika hybrid Balu. Vehivavy ny rainy dia Basset volontany (volony fohy) ary ny reniny dia Poodle fotsy, lehibe kokoa noho ny kilalao Poodle. Tena matavy izy ary antony iray lehibe satria lehibe loatra amin'ny taovany ny taova anatiny, fa tena mahafatifaty izy. '
Daisy the Bassetoodle amin'ny faha-3 taonany— 'Ny reniny dia 25-lb. i Bassett Hound izay purebred ary ny rainy dia Poodle fotsy bitika kely. Milanja 23 lbs izy, manana tongotra somary lava kokoa noho ny Bassett mahazatra, fa ny tongony eo aloha kosa manao ny anjaran'ny Basset! Malemy fanahy izy ary milamina ao an-trano ary tsy misy tiany afa-tsy ny miforitra eo akaikinao. Rehefa any ivelany izy dia faly mahita olona! Tia ankizy izy, milelaka madio ny tarehy saka isa-maraina, ary mankafy, nefa tsy manenjika, ny voron-tsika roa. Manetsiketsika ny rambony ho lasa adala izy rehefa mahita olona fantany! Izy, raha fintinina, dia ilay ANJARA Lavorary! Ny volony sy ny rantsan-tongony dia maniry haingana ary mitaky fikarakarana tsy tapaka. Tiako ireo sofina lehibe mitsoka rivotra sy ilay volo Poodle fotsy malefaka miaraka amin'ny marika voasarimakirana sy fotsy Bassett! '
Daisy the Bassetoodle toy ny alika kely amin'ny 10 herinandro
Ginger ilay kilalao Poodle / Basset Hound mix (Bassetoodle) eo amin'ny 11 taona eo ho eo— 'Latsaka ambany amin'ny tany izy ary mampiseho ny toetran'ny Basset.'
Lisitry ny Doget mifangaro Basset Hound
karazany madio Malagasy Cocker spaniel
Dane lehibe volontsôkôlà sy ny mainty
afangaro amin'ny chihuahua ny boston terrier
sary ny alika amin'ny kongona
Shih mainty Tzu Chihuahua afangaro